किन यति धेरै सुन्दरी हुन्छन ? चाइनिज युवतीहरु, यस्तो रहेछ कारण (तस्विर सहित) « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी : सौन्दर्य ताको कुरा गर्दा चाइनिज युवतीहरु अरु देश हरु भन्दा भिन्न प्रकारका हुन्छन ! चाइनिज युवतीहरुको सुन्दरता को चर्चा बिस्वमै हुन्छ।चाइनिज युवतीहरुले आफुहरुलाई सुन्दर बनाउन को लागि बिभिन्न उपाएहरु अपनाउने गरेका हुन्छन ! त्यो कारण ले पनि चाइनिज युवतीहरु आफ्नो अनुहार बेदाग , चम्किलो अनि नरम छाला को लागि बिस्वभर परिचित छन् ! घरेलु तथा पारम्परिक तरिका अपनाएरकै भरमा सुन्दर देखिन्छन।